मनोकामना माताको दर्सन गरि आज को रसिफल पढ्नुहोस ! तपाईको भाग्य कस्तो ? « गोर्खाली खबर डटकम
मनोकामना माताको दर्सन गरि आज को रसिफल पढ्नुहोस ! तपाईको भाग्य कस्तो ?
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) अरुको बसमा गरीएको कार्यले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । लगानिको क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने दिन रहेको छ । कार्य सम्पादनमा ढीलाई हुनाले सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । यात्रा सामान्य झन्झटमय रहन सक्नेछ । बल तथा प्रराक्रमका बृद्धिहुने योग रहेकोछ । नयाँ
मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ ।
“नवलपरासीस्थित चौधरी उद्योग ग्राममा आगालागी”!